Tue, Jul 14, 2020 at 2:00am
अख्तियार आयोगद्वारा घुस रकमसहित अधिकृत पक्राउ
हेटौँडा, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रकमसहित हेटौँडास्थित एक कार्यालयका अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका अधिकृत चन्दनकुमार अमात्यलाई घुससहित पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अधिकृत अमात्यलाई आइतबार आयोगको हेटौँडाको टोलीले कार्यालयबाट नै पक्राउ गरेको हो । उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिने भन्दै..
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखसहित ६ जना पक्राउ
बाँके , २० साउन जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकारी दीर्घ बहादुर पोखरेलसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकारी पोखरेलसहित २८ जना विरूद्ध अख्तियारले जेठ ३० गते अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बाँके जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक..
बाढी पहिरोबाट २ सय ६४ घर र ८ सय ५० मिटर पक्की सडक पूर्ण क्षति
बनेपा, साउन २० । अविरल वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा दुई सय ६४ घर पूर्णरूपमा क्षति हुनुका साथै आठ सय ५० मिटर पक्की सडक क्षति भएको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका १३ वटा नै स्थानीय तहमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी प्रदेश ३ सरकारसमक्ष पेश गरिएको विवरणमा मानवीय क्षतिका साथै भौतिक क्षतिको विवरण पेश गरिएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका..
बागलुङको तुरतुरे ताल फुटेर मध्यपहाडी राजमार्गको सडक बग्यो
गुल्मी, २० साउन । गतवर्ष पहिरोले बडिगाड खोला थुनिएर बनेकाे तुरतुरे ताल आइतबार राति फुटेको छ । ताल फुटेकाे पानीले मध्यपहाडी लोकमार्ग समेत बगाएको छ । अबिरल वर्षासँगै बाग्लुङ जिल्लाको बडिगाट गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर १ को तुरतुरे भन्ने स्थानमा चट्टानसहितको ठूलो पहिरो खोलामा खसेर ताल बनेको थियो । सो तालमा पर्यटन व्यवसायीहरुले डुंगा समेत सञ्चालन गर्दै..
चेतनशील महिला समूहद्वारा जुवाडेलाई ५० हजार जरिवाना
हेटौँडा, १९ साउन मकवानपुरगढी गाउँपालिका–७ स्थित चेतनशील महिला समूहले जुवातास, क्यारेमबोर्ड र ढ्याकर खेल्ने खेलाउनेलाई कारवाहीको निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले जुवातास खेल्ने र खेलाउनेलाई रु ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन् । क्यारेमबोर्ड र ढ्याकर खेल्ने, खेलाउनेलाई रु २० हजार जरिवाना गरिने समूहका अध्यक्ष ज्ञानीमाया मोक्तानले बताउनुभयो । सो नियम वडा नं– ७ का सुकौरा, अम्बोटे, स्कुलटोल, न्यौपानेटार र पाङ्टोलमा लागू..
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निकाल्यो २४ घन्टे चेतावनीसहितको विज्ञप्ती
काठमाडौँ, १९ साउन । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार बिहान २४ घण्टे चेतावनी जारी गर्दै विज्ञप्ती निकालेको छ । विभागले आज देशका केही स्थानमा चट्याङ पर्ने तथा भारी वर्षा हुने सम्भावना औंल्याउँदै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । विभागले देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ पर्ने सम्भावना रहेको तथा मध्य र पूर्वका पहाडी भूभागका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको..
अस्ट्रेलियामा सवारी दुर्घटना गराई भाग्न खोजेका नेपाली चालक पक्राउ, ५ अभियोग दर्ता
न्यू साउथ वेल्स, १८ साउन न्यू साउथ वेल्स राज्यस्थित कुमा शहरनजिकै अघिल्लो साता भएको दुर्घटनामा दुई नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । सोही दुर्घटनामा परेको कारका चालक सागर भट्टराई शुक्रबार सिड्नी शहरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। उनलाई हाल मास्कोट प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको र उनीविरुद्ध ज्यान लिनेगरी खतरनाक शैलीमा सवारी चलाएको दुई अभियोग, गलत काम गरी हानी पुर्‍याएको दुई अभियोग..
चितवनमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु
मुग्लिन, १८ साउन चितवनमा सवारी दुर्घटना हँुदा आज एक जनाको मृत्यु भएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सेती दोभान भन्ने स्थानमा रौतहटबाट काठमाडौँतर्फ जाँदँै गरेको ना ८ख २२८४ नं को ट्रक र विपरीत दिशाबाट आइरहेको लु४२ प ६५४२ नं को मोटरसाइकल एकापसमा ठक्कर खाँदा गम्भीर घाइते मोटरसाइकल पछाडि सवार नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–३ बस्ने २५ वर्षीय मिदेश नेपालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको..
दोलखामा पहिरो जाँदा १० घर पुरिए, २ जना बेपत्ता
काठमाडौं, १८ साउन । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा १० घर पुरिएका छन् भने २ जना वेपत्ता भएका छन् । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर १ झगडे जुगुमा शुक्रबार राति पहरो खसेको हो। पहिरोमा १० घर पुरिएको र अन्य ११ वटा घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए। पहिरो पीडित स्थानीयलाई प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा सारेको छ।..
काठमाडौँ, १८ साउन । ट्राफिक प्रहरीले लेन अनुशासन नमान्ने ४२ हजार ८२२ चालकलाई कारवाही गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उपत्यकाभित्र लेन अनुशासन नमानी सवारीसाधन चलाउने उक्त सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक रवीकुमार पौडेलले आफ्नो लेनभन्दा बाहिर गएर जथाभावी चलाउने चालकलाई कारवाही गरेको जानकारी दिनुभयो । “हतारोका कारण अर्को लेनमा गएर सवारी चलाउने..
मेलम्चीको पाइप सफा गर्ने क्रममा निसास्सिएर दाजुभाइको मृत्यु
काठमाडौं, १७ साउन । काठमाडौंको बालाजुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा दुई कामदारको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा २५ वर्षीय साह र २० वर्षीय शिवराम साह रहेका छन् । दुवै जना सप्तरीका हुन् । पाइपमा बेहोस भएका उनीहरुलाई उद्धार गरी महारागन्जस्तिथ शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । उपचारका क्रममा दुवैको मत्यु भएको हो । शुक्रबार बिहानै मेलम्चीको पाइप सफा गर्न सडकमा..
कलेजका नक्कली परिचयपत्र बनाउने २ जना पक्राउ
काठमाडाैं, १७ साउन । विभिन्न कलेजका नाममा नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र बनाउने दुई जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले भक्तपुरकाे गठ्ठाघरबाट नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र बनाउने दुई जनालाई पक्राउ गरेको हाे । बिहीबार प्रहरीले भक्तपुरको गठ्ठाघरका सञ्चालित फ्ल्याक्स प्रिन्ट पसलका सञ्चालक प्रकाश मानन्धर र सोही पसलमा काम गर्ने निश्चल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। उक्त पसलबाट नक्कली पचियपत्र बनाइँदै आएको सूचनापछि पुगेको महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीको प्रहरी टोलीले..
अख्तियार आक्रामक बन्दै, को-को पर्ने भए फन्दामा
काठमाडौँ, १७ साउन गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले भ्रष्टाचारका ३ सय ९ वटा मुद्दा दायर गर्यो । इतिहासमै मुद्दाको संख्या सबैभन्दा धेरै भन्दै अख्तियारले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा चित्रण गरेको छ । अख्तियारले हाल २०० बढी उच्च सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानबनि गरिरहेको जनाएको छ । पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति आर्जन गर्ने्विरुद्धको मुद्दा जम्मा ११ वटा भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रीत भएको..
बाजुरामा घरमाथि पहिरो खस्दा आमा-छोरीको मृत्यु
बाजुरा, १७ साउन । बाजुरामा पहिराले घर पुर्दा आमा र छोरीको मृत्यु भएको छ। बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–६ शान्ति टोलमा पहिरोले घर बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । बाजुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार लगातार वर्षाका कारण जिल्लाको गौमुल गाउँपालिका–६, टाँडाकोटीमा घरमाथि पहिरो खस्दा ३० वर्षीया निरुता चदाँरा र उनकी छोरी ६ वर्षीया किस्मिताको मृत्यु भएको हो। घाइतेलाई स्थानीय..
पहिरोमा आमा–छोरीको मृत्यु
काठमाडौँ, १७ साउन । लगातारको वर्षाका कारण बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–६ टाँडाकोटीमा पहिरोले घर भत्काउँदा आमा र छोरीको मृत्यु भएको छ । पाँच जना घाइते भएका छन् । बिहीबार राति खसेको पहिरोमा ३० वर्षीया आमा निरुता चदाँरा र छ वर्षीया छोरी किस्मिताको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरिक्षक जनकराज ढुंगानालेबताए । पहिरोले तीनतले घर भत्काउँदा एकै घरमा सुतेका सात जना मध्ये दुई..
फरार प्रतिवादी ५ वर्षपछि पक्राउ
काठमाडौँ, १६ साउन जबर्जस्ती चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पाँच वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका २७ वर्षीय विजय तामाङ र २८ वर्षीय निकेश तामाङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो । जबर्जस्ती चोरी मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले २०७१ पुस २३ गते गरेको फैसला अनुसार दुबै जनालाई चार वर्ष एक महीना १५ दिन कैद तथा रु ४३ हजार जरिवाना गरेकामा उक्त सजाय..
बुटवल, १६ साउन । कपिलवस्तुमा समाजवादी पार्टीका नेतामाथि आक्रमण भएको छ । शुद्धोधन गाउँपालिकाका नेता रामनयन यादवमाथि मोटरसाईकलमा आएका व्यक्तिले गोली प्रहार गरेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं. ५ देवपुर स्थायी घर भएका यादव जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा जाने क्रममा वडा नं. ३ सुसरीया पुल नजिकै गोली प्रहार भएको हो । यादव तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षका उमेदवार थिए । देब्रे पाखुरामा..
फरेन्सिक रिपोर्टले कलंकी गोली प्रकरणमा थपियो नँया ट्वीस्ट !
काठमाडौं १६ साउन कलंकीस्थित पूर्वउपसचिव विष्णुप्रसाद शर्माको त घरमा गोली चलेको घटनामा ट्वीस्ट आएको छ । गोली प्रहार भएको घटनामा हतियारसहित पक्राउ परेका शुभांकर ढकाल छुटेका छन्। उनीविरूद्ध प्रमाण नपुगेपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बुधबार रिहा गरेको हो। सोमबार राति साढे ८ बजे सिकारीले चलाउने हतियारबाट गोली चल्दा शर्माको घरको तेस्रो तलाको झ्यालको सिसा छेडेको थियो। सोही प्रकरणमा छिमेकी ढकाललाई प्रहरीले मंगलबार..
गोरखा, १६ साउन । गाेरखाकाे धुवाकोटस्थित एनसेल टावरमा आगजनी गरिएकाे छ । जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका–८ धुवाकोटकाे टावरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेकाे हाे । अज्ञात समूहले वुधवार राती ११ बजे टावरमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जेनेरेटर र पावर सप्लाइको तारमा क्षति पुगेको छ । ‘नेटवर्कले काम नगरेपछि बिहीबार विहान प्राविधिक टावरमा पुगेछन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओम अधिकारीले भने, ‘जेनेरेटरमा आगजनी भएको थाहा पाएपछि हामीलाइ खबर गरे ।’ टावरमा..
विराटनगर, १६ साउन । मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा बिहीबार बिहान मोबाइलमा गेम खेल्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । मोबाइलमा गेम खेल्ने क्रममा करेन्ट लागेर मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा बिहीबार बिहान लेटाङ-३ त्रिशूली चोकका पदमबहादुर राईका छोरा १५ वर्षीय शौजन राईको बिहान सवा १ बजेतिर करेन्ट लागेर मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीकाले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार शौजन साथी सुरज राईको घरमा सुत्न गएका थिए..
विप्लव र प्रकाण्डको ‘सेल्टर’ खोज्दै मुलुकका तीन सुरक्षा संयन्त्र
काठमाडाैं, १६ साउन । मुलुकका तीनै सुरक्षा संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले महासचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को सेल्टर खोज्न थालेको छ । जसका लागि तीनवटै संगठनको विशेष टिम सक्रिय रहेको बताइएको छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले विप्लव र प्रकाण्डलाई मात्रै समात्न सके सो समूह पूरै कमजोर हुने सरकारको निष्कर्ष रहेकाे बताए । त्यसमाथि उनीहरुका..
आगामी तीन दिन बाढी र पहिरोको जोखिम
काठमाडौँ, १६ साउन । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन नदीहरूमा पानीको बहाब बढ्न सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार बिहान प्रकाशित बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनमा महाशाखाले मुख्य र मझौला नदीमा बहाव बढ्दो क्रममा हुने बताएको छ । संखुवासभा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, बाजुरा, डोटी, दार्चुला लगायतका जिल्लाका पहाडबाट बग्ने..
विप्लव नेकपाद्वारा कैलालीमा ४४ बिघा जग्गा कब्जा
धनगढी, १५ साउन। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनपरिषद् नेपाल बर्दगोरियाले कैलालीमा चार जनाको घरजग्गाकब्जा गरेको छ। जनपरिषद् नेपाल बर्दगोरियाले कैलालीको बौनियामा ४३ बिघा १७ कट्ठा जमिन र घरमा झन्डा गाडेको हो। कब्जा गरिएको जग्गामा पार्टीको ब्यानर टाँगिएको छ। ब्यानरमा जग्गा बिक्री वितरणमा संलग्नलाई पार्टीले भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण सूचना राखिएको छ। राजेन्द्र मल्ल र वीरबहादुर मल्लको ३५ बिघा जमिन..
ईटा भट्टाको पोखरीमा डुबेर दाजुबहिनीको मृत्यु
रौतहट (गौर), १५ साउन । चन्द्रपुर नगरपालिका–९ डुमरियास्थित ईटा भट्टाको पोखरीमा डुबेर आज एकैघरका दाजुबहिनीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हनेमा सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–४ स्थायी घर भई डुमरियामा बस्दै आएका सञ्जय साहका ११ वर्षीय छोरा अनिस साह र आठ वर्षीय छोरी कल्पना साह रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ । साह परिवार डुमरियामा मोटरसाइकल ग्यारेज खोलेर बस्दै आएका थिए । मृतक परिवारका..
१० करोड अवैध अष्ट्रेलियन डलरसहित सिड्नीबाट नेपाली पक्राउ
काठमाडाैं, १४ साउन । ठूलो परिमाणमा अवैध रकम कारोबार गर्ने एक नेपाली सिड्नीबाट पक्राउ परेका छन्। उनी करिब ७ अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ (१० करोड अष्ट्रेलियन डलर) अबैध कारोबार अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । नेपालमा हुने घूस कारोबारको रकम हुन्डीबाट अष्ट्रेलिया गइरहेको चर्चा भइरहँदा ठूलो परिमाणमा अवैध रकम कारोबार गर्ने ३० वर्षीय विपिन थापा परेका हुन् । उनी बाहेक अन्य दुई व्यक्ति समेत..
कलंकी प्रकरण : छिमेकीको लाइसेन्स प्राप्त बन्दुकबाटै गोली प्रहार ?
काठमाडौँ, १४ साउन पूर्वउपसचिव विष्णुप्रसाद शर्माको घरमा गोली चलेको प्रकरणमा प्रहरीले छिमकी पूर्वइञ्जिनियर शुभांकर खनाललाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकु ल्याएको छ । महाशाखाका एसपी केदार ढकालले एक जनालाई सोधपुछका लागि ल्याइएको पुष्टि गरे । ‘पक्राउ गरेको होइन । हामीले केही सोध्नुपर्ने भएकाले ल्याएका हौं’, ढकालले अनलाइनखबरसँग भने । प्रहरीका अनुसार उनको साथबाट दुई थान हतियार र ५० राउण्ड गोली बरामद भएको छ..
काठमाडौँ, १४ साउन । मुलुकभर लागुऔषध ओसारपसारका मुद्दामा वृद्धि भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७५-७६ मा लागुऔषधका मुद्दामा वृद्धि भएको हो । आव २०७४/७५ मा तीन हजार ८८ मुद्दा दर्ता भएकामा आव २०७५/७६ मा तीन हजार ३५७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल प्रहरीको सक्रियता..
रोकिएन महिला बेचबिखन
काठमाडौँ, १४ साउन । विगतमा नेपाली महिलाको बेचबिखन भारतका कोठीहरूमा यौन शोषणका लागि हुन्थ्यो । अहिले भने बेचबिखनको क्षेत्र र प्रयोजन फैलिँदै गएको छ । विश्वका विभिन्न देशमा विविध स्वरूपमा मानिसको बेचबिखन हुने गरेको छ । भारतमा बेचिने प्रवृत्ति अहिले खाडी मुलुक र अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको छ । दक्षिण एसियाकै श्रीलङ्का, माल्दिभ्सलगायत देशमा समेत महिला यौन शोषणका लागि पु¥याइएका जानकारी प्रहरीमा..
सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा मालपोत कार्यालयका नासु र लेखनदास पक्राउ
लहान, १३ साउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा आज मालपोत कार्यालय सिरहाका नायब सुब्बासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । गोप्य सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास महोत्तरीबाट खटिएको टोलीले छड्के जाँच गर्दा घुससहित मालपोत कार्यालय सिरहाका नायब सुब्बा मिथिलेश ठाकुर र त्यही कार्यालयमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने राजवंशी चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो । मोहीको लागत पट्टावापत सेवाग्राहीबाट रु..
सावधान! यस्तो भएमा यूएईको श्रम कानूनअनुसार प्रतिबन्धमा परिन्छ
काठमाडौँ, १३ साउन रोजगारदाताको कारणले वा काम मन नपरेको कारणले ठाँउ परिवर्तन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू प्रतिबन्धमा परेको खबर सुन्नुभएको होला । यस्तो के के कारणले हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू शुभयात्रामा धेरै आइरहन्छन्। ती कारणहरू थाहा नहुँदा धेरै नेपालीहरू त्यहाँको श्रम प्रतिबन्धमा पनि परिरहेका हुन्छन् । ती कारणहरू के के हुन् र कसरी जोगिन सकिन्छ ? श्रम अवधिको सम्झौता तोडेमा सीमित करारपत्रमा जोडिएको कुनै..
Results 1960: You are at page 22 of 66